Barcelona & Chelsea oo barbaro ku kala baxay +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barcelona & Chelsea oo barbaro ku kala baxay +SAWIRRO
Barcelona & Chelsea ayaa ku kala baxay barbaro 1-1 xilli Lionel Messi uu dhaliyay gool uu raadinayay muddo 12-sano ah isagoo caawinaad ka helay Andreas Iniesta.
Labada kooxood waxey soo bandhigeen qaab ciyaareed furan, Barcelona waxey heshay gool ay ku dhalisay banaanka taasoo faa’iido fiican u ah, walow aan la ogeyn sida ay noqon doonto natiijada ka dhici doonta garoonka Camp Nou bisha soo aadan.
Ciyaarta waxey ku bilaabatay qaab aan caadi aheyn, Barcelona ayaana durba sameysay iney xakameyso ciyaarta iyadoo lasoo baxday kubadii ay caanka ku aheyd, balse Blues waxey aheyd koox mar walba dhiifoon oo u dhaga nugul wax walba.
Willian ayaa laba jeer birta ku dhuftay qeybtii hore ciyaarta, halka Barcelona ay kaliya sameysay hal fursad oo uu qasaariyay Paulinho.
Qeybtii labaad markii la isku soo laabtay ayey kubadda xamasadeeda sii kacday, waxaana gool qurux badan shabaqa soo taabsiiyay Willian oo daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta kubad xatooyo ah shabaqa Stegen dhex dhigay.
Barcelona waxey sameeyeen dadaal dheeri ah, waxeyna isku dayeen wax walba, balse qalad uu sameeyay Christensen ayaa galaaftay kooxdiisa, walow Cesar Azpilicueta uu qudhiisa eedeyn lahaa.
Andreas Iniesta ayaa kubadda si fiican u qaatay, wuxuuna si fudud ugu dhiibay Messi oo shabaqa soo taabtay.
9-kulan kadib ayuu Lionel Messi gool ka dhaliyay Chelsea, waana gool uu raadinayay muddo 12-sano ah, isago ka baxay abaar waqti dheer heysay.
Natiijada waxey kusoo dhamaatay 1-1, iyado labada kooxood aysan wax guul ah iska gaarin, waxaa la sugi doonaa waxa kasoo baxa Camp Nou marka la isugu tago isbuuca labaad ee Maarso.